वृहस्पति अस्त : काम्य कर्म गर्न वर्जित Nepalpatra वृहस्पति अस्त : काम्य कर्म गर्न वर्जित
काठमाडौँ । वृहस्पति (गुरु) आइतबारदेखि अस्त भएकाले नित्य र नैमित्तिक बाहेकका काम्य कर्म गर्न नमिल्ने शास्त्रीय वचन रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । माघ ४ गते आइतबार मध्याह्न ११:५८ बजे पश्चिममा अस्त भएका गुरु फागुन २ गते आइतबार पूर्वमा उदाउने समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
यी दुवै ग्रह अस्त हुनु तीन दिनअघिदेखि उदय भएको तीन दिनसम्म पनि कुनै कामना लिएर गरिने कर्म गरिँदैन । यी दुई ग्रह अस्त भएका बेला दान, महादान, गोदान, धान्य पर्वत दान, गृहारम्भ, गृह प्रवेश, लाख बत्ती बाल्ने, सप्ताह, नवाह, सत्यनारायण पूजा, रुद्रीपूजा लगायत कर्म गर्नु हुँदैन । वृहस्पति र शुक्र अस्त भएकैले यस वर्ष माघ, फागुन र चैतमा विवाह एवं व्रतबन्धका लग्न समेत छैनन् ।